संस्करण 1.0.3 – किन तपाईंले मलाई एउटा सन्देश पठाउन छैन?
अगस्त 5, 2018 द्वारा Ofer2प्रतिकृयाहरु
हामी नयाँ संस्करणमा घोषणा गर्न उत्साहित छन्, हिजो जारी.
यो संस्करण सबै मेल सुविधा बारे छ, र मानव अनुवाद व्यवस्थापन सुधार.
मेल सुविधा साइट गरिएका मानव अनुवाद सूचनाहरू प्राप्त गर्न प्रशासन सक्षम हुनेछ, निःशुल्क संस्करणमा तपाईंले चाँडै नयाँ अनुवाद पोस्ट सन्देश प्राप्त हुनेछ. पूर्ण संस्करण तपाईं पनि सन्देशहरू बफर गर्न अनुमति विकल्प (त तपाईं एक प्रयोगकर्ता साइटमा केहि तार अनुवाद गरेपछि एक सन्देश प्राप्त हुनेछ). तपाईं पनि साइट गरिएका नयाँ अनुवाद एक दैनिक डाइजेस्ट प्राप्त गर्न विकल्प. तपाईं पनि सन्देशहरू पठाइने ठेगाना चयन हुन सक्छ, बस यो प्रशासक इमेल लागि खाली छोड्नुहोस्.
यो संस्करण मा सुधार भएको थियो अर्को सुविधा ब्याकइन्ड अनुवाद सम्पादक छ, अझै पनि तपाईं वास्तवमा ब्याकइन्ड मा अनुवाद गर्न अनुमति छैन गर्दा, अब तपाईं थपिएको थियो कि फिल्टरिङ सुविधा र अब वास्तवमा काम गर्ने थोक कार्यहरू प्रयोग गरेर सजिलो संग अनुवाद व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ. 🙂
तपाईंको आदानों सुन्न हामी तत्पर, र हामीले यो नयाँ रिलिज पाउनेछन् आशा
न्यून दायर: सामान्य संदेश, विज्ञप्ति घोषणा, सफ्टवेयर अपडेट
संस्करण 1.0.2 – जहाँ तपाईं छन् मलाई भन र म हुनेछ…
जुलाई 22, 2018 द्वारा Ofer2प्रतिकृयाहरु
यो संस्करण पछिल्लो केही उमेरका लागि अनुरोध गरिएको सुविधा भएको छ जो भौगोलिक IP आधारित पत्ता लगाउने लागि समर्थन भन्छन् (जब dinos शासन).
यस पत्ता लगाउनको लागि सहयोग कत्तिको सक्षम गर्छ? यो yellowtree.de गरेर उत्कृष्ट GeoIP पत्ता लगाउने प्लगइन मा निर्भर. स्थापना र विकल्प प्लगइन बस ACCEPT_LANGUAGES हेडर आधारित खोज तल सेटिङ देखिनेछ भनेर सक्रिय पछि. सुधारिएको इन्टरफेस तपाईं प्रशासन प्यानल पहुँच हुँदा पनि तपाईं आफ्नो पत्ता लगाउने लागि परिणाम के हुनेछ देखाउने.
थप व्याख्या, मानेर आफ्नो साइट अंग्रेजी लेखिएको र स्पेनिश लागि समर्थन छ छ. स्पेन देखि प्रयोगकर्ताले भ्रमणमा, भाषा स्पेनिश निर्देशित गरिने छ (सत्र को पहिलो जडान). जर्मनी ले एक प्रयोगकर्ता भ्रमणमा हुनत भाषा देखि भाषा सक्षम छैन जर्मन पत्ता लाग्यो भने साइट पूर्वनिर्धारित संस्करणमा पुनर्निर्देशित हुनेछ.
जब दुवै विकल्प सक्षम छन्, को ACCEPT_LANGUAGES पूर्वता हुनेछ.
सुविधा समर्थित दुवै निःशुल्क र पूर्ण संस्करण मा.
यो सुविधा सक्षम छ जब तपाईं कुनै पनि misredirection पाउन भने (यो अस्थायी रूपमा परीक्षणको लागि यहाँ सक्षम गरिएको छ) कृपया हामीलाई सम्पर्क फारम मार्फत थाहा.
संधै जस्तै, हामी तपाईंलाई यो संस्करण गरिरह्यो.
पुनश्च. तपाईं एक पूर्व पूर्ण संस्करण र नयाँ पूर्ण संस्करणमा अद्यावधिक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने देखाउन छैन (निःशुल्क संस्करणमा मात्र अपडेट) संकोच छैन – पहिलो निःशुल्क संस्करण अपग्रेड, त्यसपछि तुरुन्तै पूर्ण संस्करणमा उन्नयन गरेर पालना, कुनै सेटिङहरू नष्ट गर्नुपर्छ.
संस्करण 1.0.0 – समय आयो
जुन 16, 2018 द्वारा Ofer6प्रतिकृयाहरु
TransPosh अन्तिम लागि जीवित भएको छ 10 वर्ष या त. हामी निरन्तर यहाँ हाम्रो साइट अपडेट प्लगइन राखिएको छ, र निश्चित wordpress.org संस्करण काम गर्न प्रयास.
को संस्करण अलग drifted रूपमा झन् दुई संस्करण कायम गर्न कठिन भए. यसैले wordpress.org संस्करण वास्तै भयो.
यो संस्करण आज जारी सुरु हुने परिवर्तन छ 1.0.0 wordpress.org र पूर्ण संस्करण मा 1.0.0.1, जो यहाँ नयाँ मानक हुनेछ (पूर्ण संस्करण एक अतिरिक्त संग समाप्त हुनेछ .1)
को संस्करण बीच मतभेद के हो?
को wordpress.org संस्करण छ एक5भाषा सीमा, र कुनै पनि विजेट समावेश गर्दैन.
पूर्ण संस्करण बढी सुविधाहरू छ, कुनै भाषा सीमा, विजेट समर्थन, र हाम्रो साइटमा backlink (जो तपाईं हटाउन रोज्न सक्छ – सर्तहरू पढ्न)
यस संस्करणमा नयाँ अरू के छ?
पूर्णतया PHP संग परीक्षण 7, annoyances र घटाइ सूचनाहरू हटाउन गर्नुपर्छ
हाम्रो लिपि लागि स्रोत नक्सा समर्थन, सजिलो तिनीहरूलाई डिबग गर्न अनुमति
FirePHP देखि Chromelogger स्विच.
यो संस्करण प्रयोग गरेर रमाइलो!